Letter to MoeMaKa – စစ်အာဏာရှင်တို့၏ သန်းချီသော ပင်စင်လစာများ | MoeMaKa Burmese News & Media
မြန်မာ့ရိုးရာတူရိယာ လင်းကွင်း ဘောလုံးကွင်းမှာ တရားမ၀င်
ဇွန်မိုး - မြန်မာပြည်သို့ပေးစာ - ပြန်ချိန်မတန်သေးတဲ့ အိမ်ဆီသို့
Letter to MoeMaKa – စစ်အာဏာရှင်တို့၏ သန်းချီသော ပင်စင်လစာများ
၁၉၈၈ – ၂၀၁၁ န၀တနဲ့ နယက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်အတွင်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ ပင်စင်နှင့် နိုင်ငံရေးဆုကြေးငွေ လေ့လာဖွယ်
မိုးမခစာဖတ်သူတဦး၊ မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၂
3 Responses to Letter to MoeMaKa – စစ်အာဏာရှင်တို့၏ သန်းချီသော ပင်စင်လစာများ
Kaba Ma Kyei* on March 21, 2012 at 10:17 am
OK ! Do it—————————————————————————-until to Hell!
Burma national anthem :
Kaba Ma Kyei (http://en.wikipedia.org/wiki/Kaba_Ma_Kyei)
As we’ll stand in duty to this, our precious land.
This is our country, our land ours by right———————————————with guns!
Aung on March 21, 2012 at 5:43 pm
Because they are more poor than people.
They are so greedy up to hell. How about our people!
maung win on March 23, 2012 at 10:03 am
တိုင်းပြည်အတွက်ဘာတွေစွမ်းစွမ်းတမန်ဆောင်၇ွက်ပေးခဲ့လို့ ငွေတွေဒီလောက်ယူ၇တာလဲ။ ပေးတဲ့သူတွေ
ကလည်းသူ့ အမေလင်ပိုက်ဆ*ကျနေတာပဲ။ ခိုးထားတဲ့ငွေတွေ၊ လဘ်ငွေတွေ၊ ပေါင်းလိုက်၇င်နည်းလား။